I-Getaway ngaseBay....indawo epholileyo eyi-1BR yokubuyela edolophini eMunising - I-Airbnb
I-Getaway ngaseBay....indawo epholileyo eyi-1BR yokubuyela edolophini eMunising
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAmber
Yangoku, ilula.. iithowuni ezingwevu ezithambileyo kuyo yonke. Ipeyintwa ngokutsha. Zonke iisofa ezintsha, iibhedi, iitawuli, imiqamelo, izinto zokupheka, izitya zokuhlamba izitya, njl.njl. I-Munising ithule cwaka ebusuku ngoko uqinisekisiwe ukuba ulala kamnandi.
Kufuphi kwiindawo ezininzi zokutya ezifana ne-Deli yethu engezantsi (i-Driftwood Deli), i-Taco Primo, i-EJ's Dine okanye i-Dash, i-Pizza ye-Pizza yamatye kunye ne-Main Street Pizza. Ukuhamba ngokulula ukuya kwi-pier yesixeko kunye neePictures Rocks Boat Cruises. Ungayibona ngokoqobo idokhi kwifestile yekhitshi. Ukuwela nje uM-28 kwaye ulapho! Kwakhona uhambo olulula ukuya e-ByGeorge Brewing (nje phantsi kwezitepsi 🍻) I-East Channel Brewery kunye ne-South Bay Outfitters yokuqashisa ibhayisekile.
4.88 · Izimvo eziyi-302
Kwi ❤️ yedolophu yaseMunising. Umgama olula wokuhamba ukuya kwi-pier yedolophu, iindawo zokutya zasekhaya, kunye neshishini lotywala. I-Munising lisango eliya kwiPictured Rocks. Kukho iikhilomitha zamanxweme kunye neendlela. Siyathanda ukuhlala apha ukuzonwabisa ngaphandle phakathi kolu luntu lunobubele. ILake Superior lolona nxweme luhlaziyekileyo kwaye sicinga ukuba uya kuvuma.
Le ndawo ingaphezulu kweDeli/Ishishini lethu lotywala. Yima phantsi uthi molo ukuba uyafuna 😊